mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraZvinotaurwa NeVadzidzi veHacettepe kuSolo Bhasi Chishandiso
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Central Anatolia Region, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, TURKEY 0
Zvinotaurwa nevadzidzi hacettepeli solo bus application
Ankara Meya Mansur Yavaş, uyo anoteerera inzwi revadzidzi uye anoteerera zvavanoda, anoenderera mberi nekutora sarudzo zvinofadza vadzidzi.
Pasi pechirevo chekuti "Mudzidzi anofambidzana neMutungamiriri", VaJavaş, avo vakaita mabasa anopa hupfumi hwevadzidzi munzvimbo dzakawanda kubva kumabhiridha emvura kuenda kune zvekufambisa, anozadzisa zvaakavimbisa mumwe nemumwe.
Mutungamiri Yavaş, akatanga gadziriso ye50 pamabhiriji emvura yevadzidzi, nguva pfupi yadarika asaina sarudzo ine chekuita nevadzidzi vanodzidza paBeytepe Campus yeHacettepe University.
MAHARA SOLO BUSES Yakatanga KUSHANDA
Pamusoro peye Ankara Metropolitan Meya Mansur Yavaş, EGO General Directorate yakatanga kupa mahara 20 solo bhazi sevhisi kuenda kuHacettepe University Beytepe Campus, uko vanopfuura chiuru chimwe chevadzidzi ve5 vanofamba paavhareji zuva nezuva.
Huru yemahara ye21 solo bhazi kunze kwe5 bellows bus inotakura vadzidzi vepamhepo mumakampasi kubva pakubuda kweiyo Çayyolu Metro pakati pe7-06.30 maawa pazuva re20.00 revhiki.
KUTENDA KWAVASIYA CHAIRMAN YAVAŞ
Vadzidzi vaishandisa mabhazi emahara pazuva rekutanga rekunyorera vakaratidza kugutsikana kwavo uye vakatenda Meya Yavaş nemazwi anotevera:
-Irem Aslan (21 makore): oldu Iyo yaive sarudzo yakanaka kwazvo. Nekuti kurongeka kwemabhazi ehete kwaiwedzera zuva nezuva nekumirira mutsetse iwo kwakava kurwadzisa kwatiri. Tinoda kutenda Mutungamiriri wedu Mansur Yavaş nekunzwa inzwi redu uye kutipa mukana wekufambisa wakasununguka.
-Adem Üngör (24 makore): oldu Zvakanga zvakanaka kwazvo kuve nechokuita pakati pe 6.30-20.00 maawa nekuti ndiyo nguva yakanyanya kubatikana. Ndatenda President wedu. Başkan
-Adandan Yüksel (21 ane makore): "Ini ndinofunga zvakabatsira. Zvanga zvakandiomera kumirira pano munzira kuenda kuchikoro. Ndinokutendai zvikuru nerubatsiro rwemahara. ”
-Esra Şahin (20 ane makore): ım Meya wedu airatidza kuti anga achifunga nezvevadzidzi kubva pazuva rekutanga raakatora chigaro. Zvakanga zvakanaka kwazvo kuva nemabhazi aya panguva dzepamusoro. "Tinoda kutenda President wedu Mansur."
- Sinan Uyar (19 makore): "Mansur Yavaş ndiye mutungamiri watinoda. Kushandira vadzidzi. Inotsigira hupfumi hwedu. Akabvumirawo nyaya ye60 boarding kadhi re200 TL. Ndatenda zvikuru. ”
-Melih Toy (19 makore ekutanga): uz Isu tinotevera basa raMansur Yavaş revadzidzi. Mahara emahara emahara mabhazi akaderedza mutsetse webhazi uye kumirira, uye kunyange kurerutswa. Tinokutendai nerutsigiro rwenyu. ”
-Mystery Muslim (20 ane makore): "Ndakaifarira kwazvo. Iyi yemahara yebhazi app yakanaka kwazvo kune vadzidzi, nekuti nzira dzevadzidzi dzemari dzakatogumira. Tinotenda Mansur Yavaş zvikuru. "
60 TL uye 200 boarding vadzidzi kunyorera kadhi kunyorera, inova imwe nhau yakanaka yakapihwa neMutungamiriri Yavaş, ichatangawo muna Gumiguru.
Tender Announcement: Gasi reMafuta Fuel Bus neBellows uye Type Solo 06 / 06 / 2013 Mvuto uye Solo Type Gas Vanopisa bhazi Alınacaktır Konya Metropolitan Municipality 100 Quantity (40 neimwe mvuto mhando uye 60 Quantity Solo Type) Gas Vanopisa bhazi pamotokari 4734 No. richatsikwa paakavapa ne rakavhurika nzira kubudikidza 19 Chikamu paruzhinji zvokuvakisa mutemo. mashoko yainyatsodonongodza younyoro dziri pasi apa: Tsitsi Registration Number: 2013 / 63053 1-Administration a) Address: Merkez Mah. Vatan Cd. Kwete 2 Selçuklu / Konya b) Telephone uye Fax nhamba: 3323551731 - 3323553745 c) E-Mail Address: satinalma@konya.bel.t matatu) nyoro Gwaro anogona kuonekwa Internet kero (kana zvinoshanda): https://ekap.kik.gov. TR / ECAP / 2-Tsitsi pasi ...
33. Istanbul Film Festival inoti Renault Motor 07 / 04 / 2014 Istanbul Film Festival anoti Renault injini Renault, yagara akapiwa nyika tiite firimu mitambo irregularity rutsigiro, vakarongwa maererano Istanbul Foundation kuti Culture uye Arts, uye icharamba kusvikira April 20 33. Inoratidzawo paIstanbul Film Festival. Turkish Cinema 100. Anopemberera makore ako, 33. Pamutambo wokutanga weIstanbul Film Festival, Renault akatumira mazita ayo akakurumbira kune chifukidzo chekundu ne "Kuenda kuFirimu mumotokari. Munguva yemutambo, Renault ichagovera yabancı Kuenda kuFree ize kusvika kune dzimwe nyika dzinodanwa mazita akakokwa kunyika yedu. VaCinema vateveri vanotevera Renault pa Facebook vachakwanisa kutora matikiti kune zvakatarisira mafirimu emutambo. Renault ine slim uye ine simba Renault
Vatasvi vanogunun'una asi IETT inoti metrobus air conditioners yakakwana 03 / 04 / 2013 Vatasvi vanogunun'una, asi IETT metrobüs air conditioners vanoti zvakakwana Mazuva ese, mazana ezviuru zvevanhu vanoshandisa metrobus line inopa basa guru. Zvisinei, nemhaka yehuwandu hwemasimba, 'kunhuhwirira' kunoumbwa mumotokari kunokonzera kukwidza kwevatasvi. IETT mahofisi em Our air conditioners vari kushanda. Huru inokonzerwa nokuwedzerwa kwakanyanya. Yol Vatasvi vatarisira kuti dambudziko racho rinogadziriswa munguva pfupi. Mumigwagwa, iyo ndiyo inonyanya kufarira motokari dzemotokari dzevanhu muIstanbul, zvinenge zvisingakwanisi kufema panguva yekushanda kwemaawa nekuda kwesimba rakanyanya. Ichokwadi chokuti mhepo yepamhepo haigoni kushanda mune dzimwe motokari pamwe chete nekunhuhwira kunobva muchikamu chechibvumirano chebhanhire guru motokari ndevaya vanofamba ne metrobus larda
Ndezvipi vanofambisa dare nevashandi vehutano vanotiudza? 17 / 04 / 2013 Ndezvipi vanofambisa dare nevashandi vehutano vanotiudza? Dzulo vashandi vesimbi vakanga vari pamusana; nhasi, kubva kunachiremba kuenda kumutevedzeri, vashandi vehutano pane zuva rekutsvaga! Rova njanji Zimbabwe Turk-zvaanoda Railway Workers Union uye Officer Sen Transport-Officer Mauri kutora nzvimbo, iri hondo dzoutano nenyanzvi Zimbabwe Turk-zvaanoda Health-Business uye Officer Sen-zvaanoda Health Sen Syndicate Zvechokwadi, iyi haisi nzvimbo yevatungamiri vemakambani ehurumende, "Ndeipi nzvimbo" iri kuumba mamiriro acho ezvinhu. Nokuti vatungamiri vemakambani emakambani aya akakodzerwa, sangano rekubatana, ruzivo rwevashandi vavo vehurumende. Asi zvinogona kutaurwa kuti vashandi vanoshanda mumatavi aya havakwanisi kudzorerwa pasina mureza kurwisana nehurumende yehurumende. Nokuti hurumende inoda
İSPARK Kutakurwa, kupaka, mugwagwa 21 / 10 / 2013 ISPARK hapana motokari, dzakamiswa mumugwagwa inoti kuramba: İSPARK watsemuka kupaka dzezvimwe pedyo mabhazi dzemapurisa zvakatangwa kutakura. Iko kambani iri kushanda kuti ivake nzvimbo itsva nekuda kwechido chikuru. ISPARK, pevhu, Metrobus, zvikepe uye mugwagwa motokari kukwira pamwe Marmaray vatanga kuti vatyairi vanoda kuramba motokari idzi 'Park, Ramba' akaita nokukurumidza basa nokuda kusakarurama. ISPARK akaponesa 34 10 zviuru zvidimbu motokari kupaka uye mugwagwa motokari kubva muedzo Istanbul akasimbisa 100 makiromita kure mudungwe wemabhazi. Vanotyaira vasingakwanisi kuvhara nokuti havana nzvimbo yezvitoro zvavo asi vanoda kusvika kuMetrobus stop kadar
Zvizvarwa zvemuKocaeli Zvakafadzwa ne Mobile Stops
Tender Announcement: Gasi reMafuta Fuel Bus neBellows uye Type Solo
33. Istanbul Film Festival inoti Renault Motor
Vatasvi vanogunun'una asi IETT inoti metrobus air conditioners yakakwana
Ndezvipi vanofambisa dare nevashandi vehutano vanotiudza?
İSPARK Kutakurwa, kupaka, mugwagwa
İSPARK 3 anoti TL kuti ienderere mberi nekupaka
Kocaelispor mutsigiri anoti bhuruu kwete tema tema
Zvinotaurwa navanhu kuSüleyman Karaman kusarudzwa kweParamende (Vhidhiyo)
BTS Inoti Hapana Njodzi Dzakabatana Dzokuuraya
Vanotyairi veEGO vanoti kwete kuchisimba pamusoro pevakadzi